1 Ndị Kọrịnt 8 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Akwụkwọ Ozi Mbụ E Degaara Ndị kọrịnt 8:1-13
Okwu gbasara iri nri e ji chụọrọ arụsị àjà (1-13)
Naanị otu Chineke ka anyị nwere (5, 6)
8 Ihe m na-edere unu ugbu a bụ gbasara nri e ji chụọrọ arụsị àjà.+ Anyị ma na anyị niile ma gbasara ihe a.+ Ma, mmadụ ịma ọtụtụ ihe na-eme ka ọ dị mpako. Ma, ịhụnanya na-eme ka mmadụ sikwuo ike.+ 2 Ọ bụrụ na e nwere ihe mmadụ chere na ọ ma, n’eziokwu, ọ mabeghị ihe niile gbasara ihe ahụ. 3 Ma ọ bụrụ na mmadụ hụrụ Chineke n’anya, Chineke ma onye ahụ. 4 A bịa n’okwu gbasara iri nri e ji chụọrọ arụsị àjà, anyị ma na o nweghị ihe arụsị bụ,+ marakwa na e nwere naanị otu Chineke.+ 5 Ọ bụ eziokwu na e nwere chi dị iche iche, ma ọ̀ bụ n’eluigwe ma ọ bụ n’ụwa,+ nweekwa ọtụtụ ndị e weere na ha bụ chi nakwa ọtụtụ ndị e weere na ha bụ ndị nwe mmadụ, 6 ma naanị otu Chineke ka anyị nwere.+ Ọ bụ Nna,+ onye kere ihe niile, ndụ anyị dị bụkwa maka ya.+ Otu Onyenwe anyị dịkwa, ya bụ, Jizọs Kraịst, onye Chineke si n’aka ya mee ka ihe niile dịrị,+ anyị sikwa n’aka ya dịwa ndụ. 7 Ma, ọ bụghị mmadụ niile ma ihe a.+ Ma ebe ụfọdụ ndị na-efebu arụsị, ọ na-abụ ha na-eri ihe ma na-ele nri ahụ anya ka ihe e ji chụọrọ arụsị àjà,+ akọnuche ha na-esighị ike ana-enye ha nsogbu.*+ 8 Ma nri agaghị eme ka anyị bịaruo Chineke nso.+ Ọ bụrụ na anyị erighị ihe, o nweghị ihe kọrọ anyị. Ọ bụrụkwa na anyị erie ihe, o nweghị uru anyị ritere.+ 9 Ma, kpacharanụ anya ka a ghara inwe otú ọ bụla ikike unu nwere ime ihe unu chọrọ ime ga-esi mee ka ndị na-esighị ike zọhie ụkwụ.+ 10 N’ihi na ọ bụrụ na nwanna akọnuche ya na-esighị ike ahụ gịnwa, bụ́ onye ma ihe ndị a nke ọma, ka ị nọ n’ụlọ arụsị na-eri nri, ọ̀ bụ na akọnuche ya agaghị eme ka obi kaa ya iri nri e ji chụọrọ arụsị àjà? 11 Ihe a mee, ọ pụtara na i jirila ihe ị ma mee ka nwanna gị na-esighị ike, onye Kraịst ji maka ya nwụọ, zọhie ụkwụ.+ 12 Ọ bụrụ na unu si otú a na-emehie ụmụnna unu, na-emekwa ka ha na-eme ihe akọnuche ha na-esighị ike sị ha emela,+ unu na-emehie Kraịst. 13 N’ihi ya, ọ bụrụ na ihe m na-eri ga-eme ka nwanna m zọhie ụkwụ, m gaghị atakwa anụ ọzọ, ka m ghara ime ka nwanna m zọhie ụkwụ.+
^ Na Grik, “e merụọ akọnuche ha na-esighị ike.”
1 Ndị Kọrịnt 8